Yintoni ikhawuntari? Intsingiselo kunye nokusetyenziswa kwekhawuntala
Bala yenye yezona zinto zilula ezisisiseko zokusebenza. Ikhawuntari yisekethe yokucinga ephumeza lo msebenzi. Ikhawuntari ubukhulu becala kukubetha kwenkqubo yedijithali. Inani libalwa ukuqonda imisebenzi yokulinganisa, ukubala kunye nolawulo. Kwangelo xesha, kukho rhoqo ...Funda ngokugqithisileyo »
Imakethi yeshishini lezixhobo zaseTshayina ifumene indawo ebambekayo ngexesha le-12 leminyaka yesiCwangciso seMinyaka emihlanu kwaye iyaqhubeka nokwanda. Liye laba sisixhobo esisemgangathweni kwilizwe jikelele, kodwa kwixa elizayo. Ngexesha, ulwakhiwo lweemarike luya kutshintsha kakhulu. Ke liliphi ithuba ...Funda ngokugqithisileyo »
Isixhobo silandela izikhokelo zeshishini kwaye sime siqinile kwintengiso
Kwindlela yokusebenza kunye nomgaqo-nkqubo wokunika umdlalo opheleleyo kwintengiso yepropathi, kuyacaca ukuba intengiso yepropathi ithatha inxaxheba kulwakhiwo loqoqosho lobunini oluxubeneyo, olunokuthi lukhuthaze ngokufanelekileyo uphuhliso lwentengiso yepropathi kunye nokuphonononga ishishini. Amanyathelo afana nokwahluka ...Funda ngokugqithisileyo »
Kwiminyaka yakutshanje, ishishini lezixhobo zasekhaya liphucule kakhulu ukusuka kwinqanaba lobuchwephesha ukuya kwizalathi zokusebenza. Umzekelo, kwiinkqubo zolawulo lwezixhobo ezinkulu, amandla ashushu, amandla enyukliya, ukuhamba ngololiwe kunye nezinye iinkalo, izixhobo zasekhaya zinokuthatha indawo yokungenisa ...Funda ngokugqithisileyo »
Ngokwedatha ekhutshwe yi-National Bureau of Statistics, eyona ngeniso yamashishini eshishini ngaphezulu kobungakanani obuchongiweyo kwizixhobo zaseChina nakwimveliso yokuvelisa imitha kwikota yokuqala yayiyi-167.95 billion yuan, ukonyuka kwe-11.6 ngonyaka-ngonyaka. % Inzuzo iyonke yayili-11 ....Funda ngokugqithisileyo »
Uhlalutyo lwendlela yophuhliso lweshishini lezixhobo lase China
Icandelo lezixhobo lase China ikakhulu ligxile kwiziphelo ezisezantsi kunye nakwiimveliso eziphakathi. Isabuthathaka kakhulu kwiimveliso zokugqibela kunye nokusika, kwaye inesithuba esikhulu kumazwe angaphandle. Ngophuhliso lwezesayensi kunye netekhnoloji, kule minyaka idlulileyo, iimitha ezi-smart ziye zaba ...Funda ngokugqithisileyo »